Chinja iyo banki mogeji | Ehupfumi Zvemari
Paunenge uine mortgage loan panzvimbo yebhangi chero ripi zvaro, chero nguva yaunoda iwe unogona kuedza kuita kukurukurirana zvakare kuzadzikisa mamiriro akanaka pamwe nesangano, kuburikidza nemaitiro anonzi kugadzirisa Novation.
Zvakare kuburikidza neimwe nzira yaunogona kusarudza tora chikwereti chako chekutengesa kune rimwe bhangi yaunoda, maitiro aya inonzi surrogacyIzvi zvinogona kuitwa kana rimwe bhangi richikupa irinani chimbadzo uye / kana mazwi echikwereti pane iro razvino bhangi pane yako mogeji iripo. Zvisinei, bhangi rekutanga Iwe unogona kudzivirira surrogacy kana iwe uri enzanisa kana kunatsiridza kupihwa neicho chechipiri chikamu mauri kuda kuisa shanduko; izvi zvinonzi simba surrogacy.
Pakutanga maitiro e mogeji shanduko Bhengi rine nguva yemazuva gumi nemashanu yekupa simba, kutanga kubva kune notarial ziviso, uye rinofanira kumira pamberi pegweta rinotaura chinangwa charo, mariri rinofanira kutsigira mumazuva gumi ebhizinesi nekuendesa kune anonzi anokweretesa kuburikidza nezvakanyorwa Inosunga chipo umo kuenzaniswa kana kuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu egeji zvinoratidzwa.
Mushure mezvo, kuitira kuti iyo mhedzisiro yekuzvimiririra zvichave zvakakwana kuti iyo bhanga idzva bharira kune yapfuura mari yakasarudzika yechikwereti, pamwe nezvose zvakawanikwa mubereko pamwe nemakomisheni anodikanwa, pamwe nekumisikidza kuzviisa pasi kuburikidza nekunyora kuruzhinji pamberi pevanyori veruzhinji.
Inofanirwa kutariswa kuti, mune ese maitiro, Novation uye subrogation vane mutengo, uyo unowanzo kuve wakakwirira mukuzvarwa. Izvi zvinodhura zvinogona kusanganisira gweta uye mari yekunyoresa, mamwe emabhangi kana emitero emakomisheni, uye akaganhurirwa nemutemo.
Zvese zvakatsanangurwa pamusoro apa ingangoita maitiro e shanduko yemabank mogeji, pamwe nemamwe mazwi aungade kutsigira iwe mukuita. Iyo mutengi wekuchinjana pakati pemabhangi Inogona kuve nguva inotora nguva uye iine imwe mari, zvisinei, ine zvakawanda zvakanaka izvo zvingaite senge zvinobatsira kwauri. kunatsiridza yako kongiri kontrakiti, uye chengetedza iyo yakawanda kwazvo mari, munguva pfupi nepakati.
Iyo huru chinangwa chekuchinja mabhangi kutora kondirakiti ine mamiriro ari nani, uye nekudaro ubhadhare yakaderera mari yeimba, asi pane izvi isu tinofanirwa kutsvaga bhangi rinotipa iyo yakanakisa inosunga kupihwa. Saka usati waita sarudzo yekuchinja mabhangi zvakakosha kuita yakanaka kutsvaga kwebhangi nemamiriro Mukati meizvi. Kune izvi, online online mogeji yekutenga masaiti senge HelpMyCash.com inogona kushandiswa sezvo ichibvumidza isu kutsvaga ruzivo pane ese mogeji nekukurumidza uye pasina kusiya imba yedu.
Tisati taenda mune zvimwe zvakawanda nezve mogeji shanduko Izvo zvakakoshawo kuti tiongorore kuti zvakanakirei uye kana zvakatinakira kuti tishandure bhangi.
1 Zvakanakira kushandura iyo banki mogeji
1.1 Chinja zvido:
1.2 Rubatsiro kutaurirana:
1.3 Bvisa zvikamu zvinoshungurudza:
1.4 Wedzera nguva yekupedzisira:
2 Izvo zvakakodzera kuti uchinje iyo banki mogeji
3 Matanho ekuchinja bank kubhengi
3.1 Tsvaga dzimwe nzira.
3.2 Mirira chipo chinosunga:
3.3 Mirira iyo yekupihwa kupihwa kubva kubhangi redu:
Zvakanakira kushandura iyo banki mogeji
Zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvinoita kuti vanhu vasarudze kuita iyo kubhengi mogeji shanduko maitiro ichokwadi chekukwanisa kushandura chimbadzo, icho chinosanganisira kuchengetedza kukuru, nekutendera kuchinjika musiyano, mumabhenji, kana mubhadharo webhangi.
Imwe nzira yekushandisa iyo mogeji subrogation iri senge nzira yekutaurirana zvirinani mamiriro, uchishandisa sekutyisidzira chinangwa chekuchinja mogeji kune rimwe bhangi rine mamiriro ari nani. Tatarisana nekurasikirwa nemutengi, bhanga rinogona kuda kuenzanisa mamiriro erimwe bhangi rekukweretesa, zvisinei, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti bhanga rinogona kusazopa kupa mamiriro ari nani, uye kuita uku kunosanganisira nhevedzano yezvakakura kushandisa, zvinodikanwa kuti uve wakajeka kwazvo pamusoro pemamiriro ezvinhu ekutaurirana, pamusoro pekujekesa nezve zvingangoitika mhedzisiro. Uye kana zvikaita sekunge hazvisi nyore zviri nani kushandisa imwe mhando yemaitiro.
Bvisa zvikamu zvinoshungurudza:
Kana uchichinja kubva pane imwe kubhengi mogeji Iwe une mukana wekubvisa zvikamu zvekushusha izvo iwe zvausingabatsirwe nazvo, senge inozivikanwa gwaro repasi, kana zvido zvakakwirira zvakanyanya, senge kunonoka kufarira. Iyi ndiyo imwe yesarudzo dzinobatsira vatengi vanokumbira kubviswa kweiyo pasi clause, asi bhanga ravo harina kubvuma uye rakaramba kuita chikwereti chembairo.
Wedzera nguva yekupedzisira:
Al chinja kubhengi mogeji Iwe uchave nemukana wekuwedzera iyo nguva yechikwereti, kusvika kune yakakwira iyo iyo nyowani sangano inobvumidza iwe. Uye nenzira iyoyo dzikisa huwandu hwemwedzi wega wega wemubhadharo wako.
Izvo zvakakodzera kuti uchinje iyo banki mogeji
Kana iwe uchida kuisa bhangi rako mogeji Iwe unofanirwa kufunga kuti izvi zvichatora mari, kutanga nekomisheni yesubrogation, kuti mune ino subrogation iwe unogona chete kuchinja chiyero chemubereko, uye izwi, kana mubatanidzwa wezvose zviri zviviri. Kana izvo zvaunazvo mupfungwa ndezvekushandura zvimwe zvinhu, izvi zvinenge zvisisipo subrogation, asi novation kana kudzima yegadziriro nyowani kune chimwe chinhu chinodhura zvakanyanya; Saka iwe unofanirwa kutarisa pane idzi shanduko dzinogona kuitwa, uye nekuisa parutivi izvo zviri kunze kwenzvimbo ye surrogacy, senge kuwedzera kweguta, izvo zviri kure kupfuura izvi.
Muchiitiko chekusvika muchibvumirano umo iyo mamiriro anovandudza zvakanyanya mubhangi idzva kwazvinorongerwa kuchinja iyo mogeji, maitiro eiyo subrogation ichave nemutengo uri kutenderedza 150 euros angangoita. Yaimbove yemahara, asi izvozvi zvachinja.
Izvo zvinofanirwa kutarisirwa kuti, taura shanduko yekuchinjisa, Kana iwe wakabhadhara iyo yemakore mashanu inishuwarenzi nemari yakabhadharwa, iyo bhangi haizodzosere iyo isingafungidzirwe mari yeiyo yasara yehupenyu hweinishuwarenzi.
Kuwedzera kune izvo iyo njodzi yekuchinja mogeji, uye uchifunga zvese zvinodikanwa kuti zviitwe, maitiro aya anosiyiwa kune sarudzo yemunhu wega wega. Kana iwe ukawana chibvumirano chakanaka nerimwe bhangi uye nekuvandudzwa kwemamiriro auinayo mubhangi rako razvino, uye izvi zvinoreva kuchengetedza munguva pfupi nepakati kwauri, shanduko yemabhengi mogeji inogona kuve yakakosha zvachose.
Matanho ekuchinja bank kubhengi
Tsvaga dzimwe nzira.
Kana zvikamu zvemwedzi wega wega zvemakore matatu ekutanga echikwereti zvakabhadharwa pasina matambudziko, vachakwanisa kuisa subrogation yeedu mortgage loan woichinjira kune rimwe bhangi. Saka danho rekutanga rekuita ndere kutsvaga mabhengi ayo anopa zvirinani uye wozvienzanisa kuti vaone kana vachivandudza mamiriro edu azvino, uye kuti vanotitambira sevatengi. Maitiro e inokurumidza uye yakapusa yekutsvaga mogeji, ndeye kushandisa yemahara online mogeji mutengi chikuva, senge HelpMyCash.com
Mirira chipo chinosunga:
Nekuve tatove sarudza bhangi idzva ratiri kuda kudzora chikwereti chedu, isu tinofanirwa kuendesa subrogation chikumbiro. Kana iro bhangi rikabvuma chikumbiro ichi, rine nguva yemazuva manomwe yekukwanisa kupa chipo chinosanganisira mamiriro matsva achakurukurwa.
Panguva iyo chikumbiro ichi chinosvika kwatiri, tichava nenguva yemazuva gumi ekufunga kuti aya mamiriro matsva anotinakidza, kana ivo havana kutigutsa.
Mirira iyo yekupihwa kupihwa kubva kubhangi redu:
Panguva ino mukuita, bhangi redu rinotoziva kuti isu takaronga iyo chinja mogeji kune rimwe bhangi, saka inguva yekuti iwe usimbise subrogation uye utipe isu nechipo chekupa kutitadzisa kubva mukuchinja mabhanga. Kana kupihwa kwerunyararo kunopihwa nebhangi redu razvino kuri nani kana zvakaenzana mamiriro ebhangi idzva, yedu subrogation maitiro anozooma mitezo, uye isu hatizokwanise kuchinja iyo kubhengi mogeji. Asi kana bhangi ikasapa chinopa chiri nani, iyo subrogation ichaenderera uye iyo banki mogeji ichachinjwa.
Maitiro acho ari nyore kwazvo kupfuura zvinoita, ukangowana chimwe chinhu chinoita kuti uve chipo chiri nani chinovandudza yako mamiriro azvino mubhengi rako regeji, verenga kuti mutengo wedanho racho uchave wakadii, uye wozvienzanisa nemari yauchazowana munguva pfupi, yepakati nepakati, iwe uchakurumidza kugona kuona kana zviri nyore kuita shanduko yemutero kune mumwe bank. Saka iwe unogona kuve nechokwadi chekuti maitiro aya anogoneka uye zvinoenderana nenyaya yako, zvinogona kureva kuchengetedza kukuru kwemari; saka usatya kutaurirana uye kutsvaga mamiriro ari nani pane ako mogeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Banca » Chinja kubhengi mogeji